KTWG | Karen Teacher Working Group » စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် မြှင့်တင်ပေးသော စာအုပ်များအား ဖန်းတီးထုတ်ဝေခြင်း
စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် မြှင့်တင်ပေးသော စာအုပ်များအား ဖန်းတီးထုတ်ဝေခြင်း
စာရေးသူ – Kyle Barker
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နှင့် ထိစပ်နေသော ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ မြင့်မားသော တောင်တန်းဒေသ၏ ဘီးရာများထင်နေပြီး ဖုန်ထနေသော လမ်းတလျောက် ထူထူထပ်ထပ် တောအုပ်ထဲမှ ရှင်းလင်းပြီး တောတောင်နှင့် ချိုင့်ဝှမ်းများဖြင့် ၀ိုင်းရံထားသော နေရာလေးသည် မှင်သက်ရှုမောဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ ကော်ဇောများခင်းထားသယောင် ထူထူထဲထဲသစ်ပင်များအကြား ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးဖြင့် “ခွန်းထစ်” ဟုခေါ်သော ဝေးလံသော ကျေးလက်ရွာလေး တည်ရှိပါသည်။ ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကြိုးလိုင်းနှင့် ဖုန်းဆက်သွယ်မှုလိုင်းများ ရောက်ရှိစေရန် ဆောက်လုပ်ချဲ့ ထွင်မှုများကြောင့် တချိန်က တသီးတခြား ရပ်တည်ခဲ့သော ထို စကောကရင်ရွာလေးအတွက် အခွင့်အလမ်းအသစ်များအား ဆောင်ကြဉ်းလာသလို လူ့ မှုအသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားများကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ကျေးလက် စကောကရင်ရွာ။ စကောကရင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းလူမှုအဖွဲ့ အစည်း၏ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်နေထိုင်ရန် ဖိအားပေးခံရမှုများဖြင့် ကြုံတွေ့ နေရချိန်တွင် ၎င်း၏ ကိုင်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လက္ခဏာအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား ဆက်လက် မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံ – Nipaporn Arthit, Foundation for Applied Linguists
စကောကရင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်ငြားလည်း ထိုင်းလူမှုအဖွဲ့ အစည်း၏ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်နေထိုင်ရန် ဖိအားများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရချိန်တွင် ၎င်း၏ ကိုင်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လက္ခဏာအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား ဆက်လက် မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ ၏ ကြွယ်ဝပြီး တမူထူးခြားသော အမွေအနှစ်လက္ခဏာများဖြစ်သော ၎င်းတို့ ၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အား ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် တေးသီချင်း၊ ရိုးရာပုံပြင်၊ ဒဏ္ဍာရီ နှင့် ကဗျာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အတူတကွ သီဆို၊ ပြောဆိုရသော ခိုင်မာမှုရှိသော နုတ်ဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်းမှုဓလေ့သည် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအနေဖြင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါမူ ပျောက်ကွယ်သွားမည့်အခြေအနေတွင် တည်ရှိနေပါသည်။
ထိုစိန်ခေါ်မှုအား ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ခွန်းထစ်ရွာနေ ပြည်သူများမှ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ (၂၀၀,၀၀၀) ကျော်မှ ပြောဆိုသော စကောကရင် မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် မိမိတို့ ၏ ကလေးများအား သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် တက်ကြွသော စည်းရုံးလုံ့ ဆော်သူများဖြစ်လာခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မိမိတို့ ၏ မိခင်ဘာသာစကားအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေနိုင်ရုံသာမက မိခင်ဘာသာစကားပညာရေးဆိုင်ရာ UNESCO ၏ လေ့လာမှုအရ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ ၏ မိခင်သာဘာစကားအား ဦးစွာတတ်မြောက်ခြင်းသည် လူများစု ပြောဆိုသော ဘာသာစကားအား လေ့လာသင်ယူရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းနှင့် သင်ယူမှုရလဒ် အားလုံးကိုလည်း တိုးတက်စေပါသည်။
ခွန်းထစ်ရွာနေ လူထုမှ ဤကဲ့သို့ ထိရောက်သော ပညာသင်ကြားမှုပုံစံအား စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ပြောဆိုသော်ငြားလည်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရိုးရာအစဉ်အလာအရ နုတ်ဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်းမှုကို အခြေခံထားသော ဤသာသာစကားတွင် စာအုပ်များ အနည်းငယ်သော ရှိနေခြင်းကြောင့် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်အနေဖြင့် တည်ရှိနေပါသည်။ ဒေသခံ အများပြည်သူ ကျောင်းများတွင် ထားရှိသော စာအုပ်များမှာ လူများစု ပြောဆိုအသုံးပြုသော ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့်သာ ရေးသားထားပြီး မိမိတို့ ၏မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် စာအုပ်များ ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စာပေထုတ်ဝေသူများအား ယုံကြည်လက်ခံစေမည့် လုံလောက်သော စီးပွားရေး အင်အားစုများရှိမနေခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များအတွက် ပုံပြင်စာအုပ်များသာလျှင် အနည်းငယ်သောရှိနေပါသည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ စကောကရင် ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ထားသော Let’s Read! စာအုပ်သစ်တစ်အုပ်အား ဖတ်ပြခြင်း။ ဓာတ်ပုံ – Nipaporn Arthit, Foundation for Applied Linguists
ဤအခြေအနေသည် ဖွံ့ ဖြိုးဆဲအာရှဒေသတလွှား ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူနည်းစုဘာသာစကား ပြောဆိုသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများအနက် များစွာသော လူမှုအဖွဲ့ များတွင် ကြုံတွေ့ ရသော အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေသည် တနေရာမှ တနေရာအကြား ဝေးကွာလှသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများအား ဆက်သွယ်ပေးသည့် ၎င်းတို့ ၏ စုပေါင်း အသိပညာ ဗဟုသုတ နှင့် အရင်းအမြစ်များအား ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးမည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီမံကိန်းများ၏ အားသာချက်များမှာ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတခုသဖွယ်ပါဝင်လာပါသည်။ အများပြည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်သော စာအုပ်များအား ကျွမ်းကျင်၊ ထိရောက်စွာ အခြား ဘာသာစကားများသို့ဖန်တီးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့ မဟုတ်) ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ လူနည်းစုဘာသာစကားပြောဆိုသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းထံသို့ ၎င်းတို့ ၏ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ကလေး ပုံပြင်စာအုပ်များ လျင်လျင်မြန်မြန် တိုးပွားဖြစ်ပေါ် ရောက်ရှိစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ပံ့ပိုးနိုင်ရန် Asia Foundation မှ Let’s read! Digital Plaform အား ပုံစံထုတ်ရေးဆွဲထားပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ (Northern Thailand) ရှိ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ဆရာ/မ များအပါအ၀င်(၂၄) ယောက်သော စကောကရင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် Let’s read! Digital Plaform အား စတင်အသုံးပြုပြီး ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ပေါင်း (၃၀) အား စကောကရင် ဘာသာစကားမျိုးခွဲ (၃) မျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ကလေးပုံပြင်စာအုပ်များသည် ရပ်ရွာတွင်းရှိ လူအများ၊ ဆရာ/မများ (သို့ ) မိသားစုများထံတွင် ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ Website နှင့် Android Reader Application မှ အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုမှာ လူထု၏ တုံ့ ပြန်မှုမှာ အပြုသဘော ဆောင်နေပါသည်။ ချင်းမိုင်၊ ချင်းရိုင်း နှင့် မဲ့ဟောင်ဆောင်မြို့ များရှိ တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် များစွာနေထိုင်ကြသော စကောကရင်လူမျိုးများသည် စာအုပ်အများစုမှာ ထိုင်းဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားထားသောကြောင့် Let’s Read! Application မှ တဆင့် မိမိတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့် ဖတ်ရှုခွင့်ရကြသည်မှာ နှစ်သက်ပီတိစရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ ၏ သာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာတွင် Let’s Read! Application အား အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့ ၏ ရိုးရာဓလေ့များ အား ကလေးများထံ လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေလိုကြပါသည်။
စကောကရင် ကျောင်းသားလူငယ်များမှ Let’s Read! digital platform အား အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ ၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော ပုံပြင်စာအုပ်များအား ဖတ်ရှုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံ – Nipaporn Arthit, Foundation for Applied Linguists
Let’s Read! Platform ၏ စွမ်းဆောင်မှုသည် လူနည်းစုဘာသာစကားပြောဆိုသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုထက်ကျော်လွန်ပြီး နယ်နိမိတ်အပိုင်းအခြားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများအား ဖြတ်ကျော်ပြီး စာအုပ်များ ဖန်တီးထုတ်ဝေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ယခုနှစ် နွေရာသီတွင် ဤဆန်းသစ်လုပ်ဆောင်မှုသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ (Cambodia) ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (Indonesia) နှင့် နီပေါနိုင်ငံ (Nepal) ရှိ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများထံသို့ပျံ့ နှံ့ ရောက်ရှိသွားပြီး ၎င်းတို့ ၏ ဒေသခံ ဘာသာစကားဖြင့် စာကြည့်တိုက်များအား ဖန်တီးမျှဝေနိုင်စေရန် ထို Platform အား အသုံးပြုလျက် ရှိနေပါသည်။ ယခုကဲ့သို့အာရှတလွှား မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသော စာအုပ်များအား ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကလေးငယ်များ၏ စာပေတတ်မြောက်မှု၌ အောင်မြင်မှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဖြစ်ထွန်းစေပြီး ၎င်းတို့ ၏ ယဉ်ကျေးမှုများကို ထင်ဟပ်သော ပုံပြင်များဖြင့် ထိတွေ့ ခွင့်ရစေသော ကြီးမားသော သင်ယူမှု နည်းစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖနွမ်းပင်မြို့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Let’s Read! eBook Hackathon တစ်ခုတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ငယ်ရွယ်သော စာရေးသားသူတစ်ယောက်မှ ဖန်တီးထားသော စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် မိန်းကလေးများအကြာင်းကို ယခုအခါ နီပေါနိုင်ငံမှ ကလေးငယ်များသည် မိမိတို့ ၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အခြေစိုက် Pratham Books ပုံနှိပ်တိုက်မှ လှပစွာ ဖန်တီးရေးသားထုတ်ဝေထားသော ပုံပြင်များအား အင်ဒိုနီရှားနိုင်ငံမှ ကလေးငယ်များသည် မိမိတို့ ၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ခွန်းထစ်ရွာလေးကဲ့သို့ အလားတူ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများမှ ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာကြီးတွင် မိမိတို့ ၏ ကလေးငယ်များ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးမည့် စာပေအရင်းအမြစ်များပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ဆက်လက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရာတွင် Let’s Read! Platform မှ တဆင့် များစွာသော စာပေအရင်းအမြစ်များအား ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွန်းထစ်ရွာရှိ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းမှ အာရှတလွှား ကလေးငယ်များအား စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်ပေါ်စေမည့်စာပေများကို ဖန်တီးရေးသားမျှဝေမည့် ဖူးသစ်စ စာပေရေးသားသူ တစ်ယောက် ကံကောင်းထောက်မစွာပေါ်ထွက်လာပါလိမ့် မည်။
Kyle Barker သည် Books for Asia မှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပြီး Let’s Read! ဆန်းသစ်လုပ်ဆောင်မှုအား စီမံခန့် ခွဲသူဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသော သဘောထားအမြင်များမှာ စာရေးသူ၏ သဘောထားအမြင်များသာဖြစ်ပြီး The Asia Foundation (သို့ ) The Asia Foundation အား စတင်တည်ထောင်သူ၏ သဘောထားအမြင်များ မဟုတ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။